Xiaomi Mi 10 ကိုသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရောင်းချမှုမှာတစ်မိနစ်တောင်မရောင်းနိုင်ခဲ့ဘူး Androidsis
ထောက်ပံ့ရေးအတွက်ပြProbleနာများလား။ Xiaomi Mi 10 ကိုဒုတိယမြောက်ရောင်းချမှုတွင်တစ်မိနစ်အတွင်း၌ရောင်းချခဲ့သည်
မကြာသေးမီက Xiaomi ထွက်သယ်ဆောင်လာသည် ၏ပထမ ဦး ဆုံး flash ကိုရောင်းချခြင်း mi 10 ။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်လျှင်မြန်စွာပြီးဆုံးခဲ့သည် ဤသည်မှာပင်တစ်မိနစ်အတွင်း ၀ င်ငွေသည်ယူရို ၂၆ သန်းကျော်အထိ ၀ င်ငွေရစေခဲ့သည်။ ရောဂါကူးစက်မှုများကြားမှပင်ဤအသုံးပြုမှုသည်နိုင်ငံအတွင်းထုတ်လုပ်နေကြောင်းတရုတ်သုံးစွဲသူများ၏ ၀ ယ်လိုအားကိုအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အဲဒီမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁) ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်ရောင်းချရန်စီစဉ်ထားသော်လည်းကုမ္ပဏီကယမန်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီဟာကတစ်မိနစ်လောက်မကြာခဲ့ပါဘူး ရောင်းဖို့ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသောယူနစ်ရုံ 55 စက္ကန့်အတွင်းရောင်းချခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းရောင်းချမှုသည်ယူရို ၂၆ သန်းကျော်နှင့်ညီမျှသော ၀ င်ငွေသန်း ၂၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်ကိုလည်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ကြည့်ရသည်မှာ ယူနစ်အတော်များများကိုထောက်ပံ့သည့်အခါ Xiaomi သည်ပြproblemsနာရှိသည် မိုင် 10 ၎င်း၏အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမှတဆင့်။ ၎င်းသည်ဒေသတွင်းရှိထုတ်လုပ်သူအမြောက်အများထုတ်လုပ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သော coronavirus ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
စင်စစ်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ် Mi 10 flash ရောင်းအားသည်နိဂုံးချုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ဒီကိရိယာ၏ယူနစ်တော်တော်များများကမလိုချင်တဲ့ဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီကိရိယာနှင့်သူရဲ့အစ်ကိုကြီးရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Xiaomi Mi 10 စီးရီးအချက်အလက်စာရင်း
မျက်နှာပြင် ၆.၆၇ လက်မ 2.340 Hz FHD + AMOLED (1.080 x 6.67 pixels) HDR90 + / Brightness အမြင့်ဆုံး nits 10 နှင့် 800 အများဆုံး momentary nits နှင့်အတူ ၆.၆၇ လက်မ 2.340 Hz FHD + AMOLED (1.080 x 6.67 pixels) HDR90 + / Brightness အမြင့်ဆုံး nits 10 နှင့် 800 အများဆုံး momentary nits နှင့်အတူ
လုပ်ငန်းစဉ် Snapdragon 865 Snapdragon 865
နောက်ဘက်ကင်မရာ 108 MP Main (f / 1.6) +2MP Bokeh (f / 2.4) + 13 MP Wide Angle (f / 2.4) +2MP Macro (f / 2.4) 108 MP Main (f / 1.6) + 12 MP Bokeh (f / 2.0) + 20 MP Wide Angle (f / 2.2) + 10x Telephoto (f / 2.4)
ရှေ့ကင်မရာ Full MPD + ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့် 20 MP ရှိသည့်နှုန်း Full MPD + ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့် 20 MP ရှိသည့်နှုန်း
OS MIUI 10 နှင့်အတူ Android 11 MIUI 10 နှင့်အတူ Android 11
ဘက်ထရီ 4.780 mAh သည် 30W မြန်သောအားသွင်း / 30W ကြိုးမဲ့အားသွင်း / 10W ပြောင်းပြန်အားသွင်းမှုကိုထောက်ပံ့သည် 4.500 mAh သည် 50W မြန်သောအားသွင်း / 30W ကြိုးမဲ့အားသွင်း / 10W ပြောင်းပြန်အားသွင်းမှုကိုထောက်ပံ့သည်
ချိတ်ဆက်မှု 5G ။ ဘလူးတုသ် ၅.၁ ။ Wi-Fi ကို 5.1. USB-C ကို။ NFC ။ ဂျီပီအက်စ်။ GNSS ။ ဂယ်လီလီယို GLONASS 5G ။ ဘလူးတုသ် ၅.၁ ။ Wi-Fi ကို 5.1. USB-C ကို။ NFC ။ ဂျီပီအက်စ်။ GNSS ။ ဂယ်လီလီယို GLONASS
အသံ Hi-Res အသံနှင့် Stereo Speaker များ Hi-Res အသံနှင့် Stereo Speaker များ
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် 162.6 x 74.8 x 8.96 mm / 208 ဂရမ် 162.6 x 74.8 x 8.96 mm / 208 ဂရမ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ထောက်ပံ့ရေးအတွက်ပြProbleနာများလား။ Xiaomi Mi 10 ကိုဒုတိယမြောက်ရောင်းချမှုတွင်တစ်မိနစ်အတွင်း၌ရောင်းချခဲ့သည်
Samsung Galaxy M31 ၏ဈေးနှုန်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်၎င်း၏ပြန်ဆိုချက်များနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်